Sunaulo Nepal | तपाई कस्लाई भोट हाल्नुहुन्छ ? जनताको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस (भिडियो) तपाई कस्लाई भोट हाल्नुहुन्छ ? जनताको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस (भिडियो) – Sunaulo Nepal
तपाई कस्लाई भोट हाल्नुहुन्छ ? जनताको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस (भिडियो)
स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा रमेस प्रसाद शाहले तयार पारेको सामग्री तपाई कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ, र किन ? जनताको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस !
२४ बैशाख २०७४, आईतवार ०९:१४ मा प्रकाशित